Zụrụ ma na-ere Maggot BSF na otu esi ejikwa Maggot • Yurie BSF
Zụrụ ma ree Maggot BSF & Esi esi ahia ya
BSF Maggot Sale na Maggot Marketing Marketing - BSF ma ọ bụ na-ere ahia ma ọ bụ zụrụ BSF maggot nke bụ ụzụ ma ọ bụ ikpuru ụfọdụ ndị Indonesian ka bụ ihe ọhụrụ. Mgbe mba ndị ọzọ nọ ebe ahụ, azụmahịa a emeela ruo ọtụtụ iri afọ. Ihe dị mkpa ka a hụ mgbe ịzụtara BSF maggot osisi bụ àgwà nke ndị na-azụ anụ, ha ga-elele ma chọpụta tupu ịzụta BSF maggot.
Maka ndị na-amaghị ma mara ụzọ nke Maggot BSF n'oge a na-enweghị isi, n'echiche ha, ha ka dị ka ruru unyi, ruru unyi na ọnyá. ọ bụghị ikwu banyere mbata nke ọtụtụ narị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na-ebute ọrịa.
N'ihi ya, ị ga-achọ ịkụzi ahihia nke ọma, nke mere na naanị oji ojii ma ọ bụ BSF nọ n'ugbo gị. Ihe na-esi na ya pụta dị ọcha, ọ bụghị ọnụ ọkụ na ọnụ ahịa dị ala.
Onye Agha Na-agba Ọsọ Black
A ma ama nwere ọtụtụ uru dịka nri azụ, anụ ọkụkọ, anụ ugbo, maka ụwa nke ọgwụ, ndị uweojii na ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ya nwere ike inweta nnukwu uru, n'ihi na ahịa niche dị ka nri anụ ụlọ, ọnụọgụgụ ndị ahụ dị mma, na-ele anya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ anụ ọhịa na-arụ ọrụ na Indonesia.
Ọtụtụ ụlọ oriri na-eri nri bụ ihe ịrịba ama na azụmahịa ahịa anụ ọhịa bara ezigbo uru. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite azụmahịa a, ị ga-ebu ụzọ mara analysis nke azụmahịa.
Nyocha nke Maggot Business
Na nyocha, n'ezie, gụnyere ọnụahịa nke mkpụrụ, ahịa, ụdị nri, mgbasa ozi ọdịbendị. Ihe kasị mkpa na azụmahịa a bụ ka ha ghara ịnụ ísì na ka ha nweta uru, mgbasa ozi ga-abụ site na mkpofu ahịhịa, anụ ụlọ ma ọ bụ n'efu.
Maka nchịkọta zuru ezu nke nyocha nke nchịkọta anụ nke sitere na nhazi mbụ iji buru ibu na-eto eto nwere ike mụọ ebe a> Nnyocha nke ahịa Maggot Cultivation
Ntak emi mbemiso ikpanamde idiọk? N'ihi na ọ bụrụ na ísì ga-eme ka ijiji na-acha akwụkwọ ndụ, ma ghọọ onye na-eme ka ndị ezinụlọ na ndị gbara ya gburugburu gosipụta ya.
Usoro maka ịzụ ahihia odorless na-eme ka ị dị mma na ihe na-enye obi ụtọ, Nchekwa n'ihi na ị gaghị egosiputa site na ezinụlọ na nkasi obi n'ihi na azụmahịa gị nwere ike ịga n'ihu ruo mgbe ebighi ebi.
Atụmatụ maka Business Cultivation Maggot
Enwere uru dị ukwuu na nsị ubi, otu n'ime ha bụ na njikwa ahụ dị mfe ma na-ewe otu awa abụọ kwa ụbọchị.
Ya mere, maka mmalite nke azụmahịa a, ị nwere ike ime ya dị ka azụmahịa azụ n'akụkụ ma ọ bụ maka obere nsị nsị. Enwere ike ime mmepe mgbe e mesịrị. Iji gbakọọ ọnụahịa ndị dị mkpa iji kwadebere nwere ike imeghe na maggot azụmahịa analysis.
Isi obodo dị mkpa iji mee ka ikpuru dị ntakịrị, n'ihi na ihe maka ihe ubi a nwere ike iji ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ dị n'ụlọ. Maka arụ ọrụ kwa ụbọchị ma ọ bụ ego nke mgbasa ozi ọdịbendị dịkwa oke ọnụ ala ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu.
Gini mere o ji dị ala na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu? n'ihi na ihe ndị ahụ na-emekarị na-eji mkpofu anụ ụlọ, anụ ụlọ na ihe mkpofu nke dị ebe niile.
Nri ndị dị na maggot zuru ezu ma ọdịnaya protein dị oke elu, nke mere na enwere ike iji ya dị ka nri anụ ọhịa ọzọ na nri anụ ahụ maka ụdị azụ na ọkụkọ ọ bụla.
BSF Maggot Ahịa
Na-adabere na àgwà a ga-azụrụ na maka nzube dị aṅaa? Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eri nri ma ọ bụ anụ ndị ọzọ na-azụ ụmụ anụmanụ gụnyere anụ ọkụkọ n'etiti Rp5.000 - Rp9.000 / kg.
Ma mkpuru osisi n'etiti Rp10.000 - Rp500.000 / kg, dabere na mma. ihe dị iche bụ usoro nlekọta. Otu esi achọta nkpuru ọma nwere ike ịbịa ma hụ otu esi emeso ha.
Ma ọ bụ site n'ịjụ onye na-ere ahịa banyere otu esi elekọta mkpụrụ. Ọ bụrụ na a na-enye usoro nlekọta nanị mkpofu, àgwà ahụ abụghị otu. Ụdị dị ka nke a dị mma maka azụ na azụ anụ ọkụkọ. A gaghị eji ya dị ka osisi.
Họrọ ndi nkuzi ndi nwere ahuhu na ndi mmadu na-enweta ndokwa LIVE, obughi nani ederede ma obu edere ederede. Jiri nlezianya ahọrọ osisi ndị dị elu n'oge na-aga nke ọma nke na-eto eto.
Ọnụahịa na-abụkarị nke kwesịrị ekwesị na mma, ọnụ ahịa ka mma. Ma nyochaa onye ọrụ ugbo mbụ!
Olee otú BSF Marketing si
Ọ dị mkpa ka ndị nke ị chọrọ ịmalite azụmahịa a, ka ha buru ụzọ mụta otú e si azụ ahịa owuwe ihe ubi ahụ. Ya mere, mgbe ị malitere n'eziokwu n'ezie.
E nwere ike ịzụ ahịa BSF maggot n'ụzọ ndị a: * Na-eleta ndị ọrụ ubi ugbo, anụ ọkụkọ, ihe ndị na-emepụta ihe na ntụrụndụ. Otu ụzọ dị irè maka gị bụ ịga n'ihu na-enye ndị ọrụ ugbo nọ gburugburu ebe dị nso. Soro ya na mmekorita onwe gi.
Dịka ọmụmaatụ: Kpọọ ndị ọrụ ugbo bụ ndị nwere ala na ahụmahụ na-azụkọta azụ, ka nri nri anyị na-enye. A na-atụ aro ka nkwekọrịta nkwekọrịta a bụrụ nkwekọrịta ederede.
Kedu ihe ọ bụrụ ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ugbo na-azụ anụ ọhịa ma ọ bụ ndị ọrụ ugbo na-anụ ọkụkọ gbara gị gburugburu? Ọ bụrụ na ọ kachasị nso, ị nwere ike ịzụ ya site na iji ngwaọrụ mgbasa ozi dịka Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube ma ọ bụ mee ebe nrụọrụ weebụ n'efu.
Kwalite azụmahịa gị.
Gaa n'ihu na mgbasa ozi dịgasị iche iche, echefula ịbanye na ìgwè dị iche iche nwere njikọ na azụ na ọkụkọ. Maka Facebook ị ga-eji akaụntụ onwe gị, mepụta otu akaụntụ ma ọ bụ ibe.
Nkwalite na Akaụntụ Twitter
Anyị nwere ike iji mgbasa ozi mgbasa ozi na Twitter iji kwalite azụmahịa anyị. Ma ka mma, karịsịa maka nkwalite site na Twitter, kwadebe weebụsaịtị n'efu. Ọ bụrụ na e nwere posts ọhụrụ na-esi na website anyị kere.
Nkwalite na Instagram Akaụntụ
Na SOS nke a bụ onye a ma ama maka oke ọnụ ahịa ya ma jiri ya tụnyere akaụntụ Facebook, ma eleghị anya n'ihi na ndị Facebook na-eji ya dị ka ngwá ọrụ maka mmekọrịta mmekọrịta, ebe na Instagram ọ bụ usoro ahịa karị.
Usoro a, ọ bụ ezie na ntakịrị "mgbagwoju anya" ma ọ bụ azụmahịa anyị, ma ọganihu dị ogologo oge dị mma, yana nke ahụ dịka ngwá ọrụ iji mee ka obi sie ndị nwere ike ịzụ ahịa ahụ ike ka anyị na-agba ọsọ.
Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, site na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi a, ị nwere ike ịdọta ndị ahịa nwere ike inweta si mba ọzọ, n'ezie ha na-ahakarị n'ụdị buru ibu na ọnụahịa ahụ pụkwara ịdị mma karịa ahịa nke obodo.
Ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ugbu a dị mfe ma dị ọnụ ala, ọbụlagodi na ị na-eji ụlọ ọrụ sitere n'aka Google, dị ka blogspot na Google bụ azụmahịa m, ha abụọ bụ 100% n'efu. Ihe nlele nke mgbasa ozi n'efu na google blogspot
Nkwalite site na Ime Ụlọ Ahịa Echere
Enwere ọtụtụ ọrụ na-enye gị ịmepụta ụlọ ahịa ịntanetị site na ọnụ ala karịa ndị dị mma. Ị na-ahọrọ dị ka ego gị. Usoro ahụ bụ ụdị google "ọrụ ntanetị n'ịntanetị"
Họrọ nlezianya, ụfọdụ n'ime ha dị mma, ụfọdụ ga-akpachara anya. Gbalie ala ma jụọ ha ọtụtụ ihe, rịọ maka aro maka ihe ndị ị kwesịrị ịkwadebe. Achọla ọrụ na ha enweghị ike inye ndụmọdụ kachasị mma maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ha ga-arụ ọrụ maka anyị.
Ebe Nkwado Ndị Ọzọ
Ị nwere ike iji saịtị dị ka OLX, Tokopedia, na ndị ọzọ. Mepee ozi ọzụzụ maka azụmahịa azụ ahịa. Ka azụmahịa anyị na-eto ngwa ngwa, atụmatụ anyị aghaghị ịbụ ihe okike ma bụrụ ihe pụrụ iche, otu n'ime ha bụ ịmeghe mkpọtụ ọrụ ọzụzụ azụmahịa, gịnị mere usoro a ji dị mkpa ??
Ịme ka ọha na eze mara na ị bụ otu n'ime ụlọ ahịa na-emepụta nri. Site na ịzụ ahịa a ga-eme ka azụmahịa gị gbasaa ngwa ngwa ma n'ime obodo ma site na mpụga obodo ahụ.
Azụ ahịa gị ga-abụ ndị a ma ama ngwa ngwa n'ihi na ndị enyerela ọzụzụ azụmaahịa enyere aka. nkwalite azụmahịa nke okwu ọnụ dị irè ma e jiri ya tụnyere nkwalite site na mgbasa ozi.
Ọ bara uru maka ndị ọzọ. Echegbula ma ọ bụrụ na ndị ị zụrụ azụ nọgidere na-achọ ịchụ ahịa Maggot. Ma eleghị anya, ndị ọka mmụta ga-abụ ndị mmekọ gị n'otu ụbọchị. Ogologo ahia nke ahia a ka buru ibu buru ibu maka mkpa ndi mmadu na enweghi ego.
Nkụzi azụmahịa bụ naanị maka ebumnuche mmadụ, ma ọ ga-emesị bụrụ onye nkwado ma ọ bụ ọzụzụ achụmnta ego / onye na-akpali ya n'ọhịa.
Ịmalite ọzụzụ maka azụmahịa nke Maggot anaghị achọ ụgwọ ọzọ, n'ihi na ịkwadebe ị dị njikere ma rụọ ọrụ dika ọ dị na mbụ. Nanị ịkọwa ụzọ ziri ezi na nzọụkwụ, ihe a ga-eme site na mmalite ruo ọgwụgwụ.
Na-ere Maggot Mkpụrụ
Otu esi choputa elu & ume BSF Maggot Mkpụrụ. Mgbe ị na-ahọrọ mkpuru osisi maka ịzụlite ma ọ bụ ịkọ ihe, ị ga-ahọrọ osisi ndị ka mma ma dị mma.
Nke a bụ n'ihi na mkpụrụ osisi dị elu ga-emepụta ọtụtụ BSF larvae / ikpuru. N'iji ya kwuo, osisi ndị dị elu bụ mkpụrụ agha ojii na-enwe ihe ndị ka mma, ya bụ na ha nwere ike igosi ụdị nne na nna ha ma nwee nnukwu ihe oriri ka ha nwee nnukwu akụ na ụba, ha adịghịkwa arịa ọrịa.
Enwere ike ịhụ nke a na ịjụ ndị ọrụ ugbo ka esi elekọta ya nakwa ụdị nri a na-enye osisi n'oge ha na-elekọta site na nwata iji ghọọ mkpụrụ nke BSF.
BSF Maggot dị ka anụ ọhịa ọ bụla nke ga-enwerịrị ihe oriri kwesịrị ekwesị n'oge oge mmezi ahụ. Tinye nutrigot na nmalite mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-enye aka ịkwalite BSF ka ọ bụrụ di ma ọ bụ nwunye ma dina nsen.
Uru nke osisi dị elu
Mmepụta dị elu ma ghara igbu ya ngwa ngwa
Na-agba ọsọ ọsọ gaa na okenye BSF / BSF ijiji
Ọnụ ọgụgụ dị ntakịrị na-anwụ anwụ
Ogo nke àgwà BSF dị elu dị n'etiti 500 na 900 oke eriri nke otu akwa
Enwere nnukwu buru ibu ma buru ibu
Na-eguzogide pests na ọrịa, karịsịa n'oge nwa ọhụrụ na-erughị otu izu
Njirimara ndị dị elu nke mkpụrụ BSF dịka n'elu nwere ike ịnọgide na-ahụ maka mkpụrụ ndụ ma ọ bụrụ na a na-agbasa mkpụrụ BSF.
Na nkenke mgbe ị na-azụta BSF mkpụrụ osisi ndị na-emepụta ihe ga-emepụta ụba / ụgbụ nke ọma n'afọ nile, ihe bụ isi bụ iwepụta ngwa ngwa karịa 18 kwa ụbọchị karịa 30 kwa ụbọchị
Mkpụrụ kachasị mma na-eguzogidekwa ọnọdụ oke gburugburu ebe obibi, karịsịa ma ọ bụrụ na enwere ọkpụkpụ ruo mgbe ọ dị otu izu na n'elu, na-agbasa ngwa ngwa n'ihi ntakịrị mkpụrụ ndụ ọnụọgụ, ngwa ngwa ngwa ngwa ma na-anabata usoro omenala.
Ọ bụrụ na opekempe nke 85% ka mezuru ogo kachasị elu nke ndepụta dị n'elu, onye agha ojii na-agha mkpụrụ dị iche iche dị ka ndị ka elu. Ọ bụrụ na ọ gaghị akwado 85% chọrọ n'elu, mgbe ahụ, mkpụrụ osisi BSF na-ekewa dị ka nkịtị.
Inye nri na-edozi
Mkpụrụ kachasị mma: nnukwu akwa 2cm
Ịdị oke anụ: oke
Mgagharị: ịgagharị agagharị
Mkpụrụ agba: nwa
Aroma: enweghị isi